Waxaad ugu dambeyntii waxaa sameeyey! File ayaa MP4 aad u doonayay, waayo, sidaas dheer ugu dambeyntii waa qalab aad iyo haatan oo dhan waxa ay qaadataa waa u furan yahay. Laakiin, Sharciga Murphy ayaa ayaa dhaqan galay mar kale iyo aad u ogaato waxa taas macneheedu. Haa, file MP4 uu leeyahay cod laheyn. Hadda waa maxay?
Ha argagixin, dhibaato kasta uu leeyahay sababta ka dambeysa in aad awood u yeelan doonaan si ay go'aan uga adigoo isticmaalaya hubinta anfacaya ah. Marka aad la ogaado dhibaatada, waxaad awoodi doontaa inaan ku saxno dadaal xad yar oo aan haysan si ay caro ka dhan ah mishiinka.
Mararka qaarkood, file MP4 ee aad diiwaan la mid qalab si fudud u diidi doono in uu ciyaaro ay codka ku saabsan qalab kale, in kastoo qaab file MP4 ah waa inay ahaato mid adduunka oo socon dhamaan dhufto iyo nidaamyada hawlgalka. Tani ma aha sabab ah oo loo baqo, sida waxyaabaha sida dhici arrin inta badan aan cid isagoo qalad.
Warka wanaagsan waa in files MP4 isagoo cod jirin waxaa aad u dhif ah oo la xiriira qalabka. Taas macnaheedu waa in aad u badan tahay ma yeelan doonaan in keyd la taararka ama in ay qaataan qalab aad si xirfad leh shati u dayactir ah oo kharash badan. Warka xumina waxa weeye waxa laga yaabaa in gabal kasta oo ka mid ah software on qalab aad in uu ku keeni karo dhibaato ama xitaa file laftiisa la khilaafo yaabaa dhamaystiraya waa suurtogal aheyn in la ogaado waxa sababta ka hor.
Inkasta oo ay aad wax kharaj ah kuguma in ay isku dayaan iyo hagaajin dhibaatada MP4 files la qariyaa keligaa, aad ayaa laga yaabaa inuu ku qaataan ugu yaraan kala bar dhib saacad laakiin ugu dambeyntii waxaad ogaan doontaan sababta dhabta ah ee file MP4 aad isagoo cod jirin . Sidaas naftaada hubeeyo samir iyo aynu ka heli arrinkaas.
Part1: Guide Dhibaatooyinka
Part2: Top 3 Sababaha MP4 Lahaanshaha Sound No
Mid kasta oo ka mid ah qaybaha soo socda ku talin doonaan tallaabo fudud lagu ogaanayo iyo, waxay ku salaysan tahay natiijada aad ka hesho, sababta oo ah tahay in lagu dhibaatooyinkaaga. Si aad u ogaato waxa sababta waxaa laga yaabaa, wuxuu hoos ugu dhaadhacaa "Top 3 Sababaha MP4 Lahaanshaha No Sound" qaybta qodobkan ugu rogto jidka oo dhan.
1. file waxaa la ciyaari karaa in ciyaartoyda kale si sax ah?
Isku day ciyaaro MP4 ah dhowr ciyaartoy oo warbaahinta on your computer oo loo arko haddii dhibaato la soo saari. Haddii aadan haysan ah ciyaaryahan warbaahinta kale ah mar hore, halkan waa dhawr talo oo lacag la'aan ah.
Download VLC Player ag maraya in link tan iyo riixaya badhanka orange weyn, sida kaaga muuqata sawirka hoose.
GOM Player waxaa laga heli karaa halkan , oo ay download waxaa bilaabay riixaya badhanka hoos ku qoran:
Ugu dambeyntii, waxaad ka heli kartaa oo ciyaaryahan MPC-HC adigoo gujinaya halkan , ka dibna riixaya badhanka hoos ku qoran:
Hadda, isku day ciyaaro faylka MP4 dhibaato in mid ka mid ah ciyaartoyda kor ku xusan. Hadii faylka wax ma laha dhawaaqa kasta ee ka mid ah ciyaartoyda kale ee ka mid ah, la soco haddii ay jirto fariin qalad ah oo soo bandhigay marka aad isku daydo in ay ka ciyaari faylka. Haddii ay jirto, waa badan tahay Sababta # 1. Haddii kale, waa Sababta # 2.
2. in MP4 soo gudbin kaliya ee aan dhawaaq?
Next, isku day in aad u aragto haddii aad leedahay kaliya file hal MP4 in uu idin siinayo dhibaatooyinka ama waa wax ka badan hal. Hubi si aad u hubiso dhowr files MP4 in aad tahay qof gaar ah u ciyaaray si sax ah ee la soo dhaafay oo wada hubiyo in ciyaaryahan warbaahinta kaliya. Haddii uu jiro kaliya hal file in uu idin siinayo dhibaato iyo dadka kale ee u wanaagsanyahay shaqeeyaan, ka dibna waxa ay u badan tahay Sababta # 3. Haddii dhammaan faylasha MP4 si lama filaan ah u diido inuu ciyaaro dhawaaqa ama shaqada oo dhan, kaasu waa kan ugu badan tahay Sababta # 2.
Sida kor ku xusan, xalba aan loo qaadan karin oo ah suurogalnimada inuu hardware waxyeelo keenaya MP4 si lahayn dhawaaq kasta. Inkastoo ay suuragal tahay in aragtida, xaaladaha, waxa ay tahay mid aad u dhif ah in dhaqanka iyo aad waa in aan la isku dayayaan in ay si kastaba iyaga hagaajin naftaada. Haddii gabi ahaanba dhan xal halkan ku qoran ay ku guuldareysato, ka dibna waxa ay u badan tahay baadi hardware iyo idinku waajibka ah inaad dib ilaa xogta gaarka ah iyo computer ku qabsan farsamayaqaan ruqsad loo dayactir.
Sababta # 1 - codecs Qalad
Codecs waa gogo 'yar oo code fadhiya nidaamka qalliinka iyo firfircoonaan kaliya marka file multimedia gaar ah ama fiidiyowga ciyaaraha uu ku weydiiyo si ay u shaqeysiin. Haddii codec gaar ah ma joogo ama aan si fiican u shaqeeya, file la xiriira warbaahinta ama shaqo ma awoodi doonaan in ay dhaqaajiso. Tani waxay keeni kartaa in wax laga video sawirgacmeed oo kaliya in qaraarkii qaar ka dhawaajin doonaan dhabtii. Nasiib darro, waqti ka waqti, software si fudud ku guuldareysto oo ay jirto wax aad sameyn karto si aad uga hortagtid. Dhibaatada kale waa in codecs waxaa loo tixgeliyaa aan daruuriga ahayn iyo guud ahaan waa ilaa user ay u soo baxdo iyo rakibi.
La'yahay codecs doonaa had iyo jeer in la ogaadaa by media player marka aad isku daydo in faylka weydiinaysaa iyaga u furo. Xalka ee dhibaatadan waa cadaalad ah mid sahlan oo ku lug degsado iyo ku rakibidda codec K-Lite ka Pack ag maraya in link tan iyo gujinaya mid ka mid ah xiriirka hoose ku cad.
Tani waa xirmo dhamaystiran oo ay ku jiraan oo dhan codecs warbaahinta suuragal ah in si fiican loo ciyaaro xataa qaabab file ugu dam ah. Marka aad ka soo dejisan codec K-Lite ka Pack, si fudud ku rakibi isticmaalaya fursadaha rakibo default iyo computerka aad.
Sababta # 2 - kharribeen warbaahinta ciyaaryahan rakibaadda
Waxyaabaha loo isticmaalo in ay si fudud marka si software rakibidda yimid 10 sano ka hor. Kuwa jeer arinku ahaayeen marka user lahaa si buuxda uga taliso uu computer u gaar ah. Maanta, nidaamyada hawlgalka waxaa lagu soo gali in dhibic ka mid ah oo kali ah oo shaqeeya, oo xitaa daciifin karta howlgalka ciyaartoyda warbaahinta. Xaaladaha kale, rakiban ama waxa la xidhiidhin updates abuuri karaan daadsanaanta waa qaraw ka mid ah aad media player Aamina. Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa loogu noqonin gobolka hore iyadoo la isticmaalayo Windows System soo celi . Haddii kale, haddii mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta ogalayn in ay u muuqataa wax badan ka wanaagsan yahay mid ka mid ah aad horay loo isticmaalo in lagu shaqeeyo, waa laga yaabaa in fikrad fiican in ay beddelaan, waxa uu.
Sababta # 3 - file MP4 kharribeen
"Waxa uu dhintay, Jim". File ayaa waxaa fasaadi ka baxsan kabashada iyo waxaa jiri kara tiro ka mid ah sababaha ay taasi dhacday. Sida had iyo jeer, hagaagga ugu wanaagsani waa ka hortaga. Sida habboon, files warbaahinta aadan rabin in ay ku kharribeen in si degdeg ah ku taageeray doonaa kor lagu qoro in a adeega kaydinta daruur ku salaysan . Ama waxaad sidoo kale soo lifaaqi kartaa file ah in e-mail u soo dir naftaada inay daafaca midig.
Haddii kale, haddii aad heysato aad file dhex diinta, download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate, taas oo ah wax soo saarka wejiyo Combo la tafatirka iyo dhalmo warbaahinta awoodaha soo jireenka ah, adigoo gujinaya link tan iyo riixaya badhanka sawirka hoos ku qoran.
> Resource > MP4 > Maxay My MP4 File Hayso Sound No?